I-Mylral Plantlamp isibane sezityalo esikhethekileyo sokusetyenziswa kwangaphakathi | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Into yethu uyilo kwaye kukho amaxesha apho singathetha singathethi izimvo ezipholileyo ezivela kubaqambi abanjengoEmilia Lucht noArne Sebrantke ukusuka studio Studio We Love Eames, abaphuhlise isibane esivumela izityalo ukuba zikhule phantse kuyo nayiphi na indawo.
Ngokusebenzisa izibane ze-LED endaweni yokukhanya kwelanga ngokuthe ngqo, 'i-Myrdal Plantlamp' iyakwazi yenza indalo yakho ezinzileyo. Oku kuyivumela ukuba ilingise inkqubo ye-photosynthesis, ke awudingi manzi okanye naluphi na uhlobo lokhathalelo ekugqibeleni.
Uyilo olumangalisayo kwabo hlala kwindawo exineneyo apho ukukhanya kwelanga kubonakala kungabonakali emini kwaye apho ufuna ukunikela ngombala oluhlaza wesityalo ngenxa yesi sibane.
Ngapha koko, uEmilia noArne beza ngqo nale ndalo ukuze abantu bafudukele ezixekweni bangazisa izityalo kunye nabo kwezo zinto zangaphakathi apho ngamanye amaxesha, ngenxa yendawo encinci, ayiniki ndawo induduzo. Esinye sezo zibane onokuba nesitudiyo sakho kwisixeko esikhulu kwaye sikukhuthaze yonke imihla ngelixa usebenza ekhaya ukuba kunjalo.
I-Plantlamp ye-Myrdal ingaba ibekwe naphi na ekhayeni lakho enkosi yoyilo ezimbini ezahlukeneyo: enye exhonywe eluphahleni kunye nenye enokusetyenziselwa ukuyibeka kumphezulu othe tyaba njengetafile esecaleni kwebhedi okanye itafile yokutyela. Isibane somgangatho okwangoku senziwe ngeglasi ekhethekileyo egubungela kwaye iqhube umbane, ke intambo ayiyomfuneko kulomsebenzi uphambili.
Ngala manqaku awodwa, iStudio Sithanda amaEames Ndiyathemba ukongeza indalo encinci kwezo ndawo zasezidolophini naphina.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukuphefumlelwa » Izibane ezinobuchule ezivumela izityalo ukuba zikhule ngaphakathi ngaphandle kwamanzi okanye ilanga elithe ngqo